isiXhosa Archives – Messages for Mothers
Imeko ye-COVID-19 inzima kakhulu yaye ikhokhelele kutshintsho oluninzi lwendlela iinkqubo ezenzeka ngayo. Ungadibana nobunzima ekliniki, kwisitishi sAamapolisa okanye xa usebenzisa inkonzo yezempilo okanye eyezentlalo. Abaniki-nkonzo nabo bazama ukulawula ngeendlela ezintsha zokwenza izinto yaye abayi kusoloko besazi ukuba yiyiphi imithetho emitsha. Oku kungenza uxinzelelo kakhulu kubo nakuwe. Ukuba uzilungiselela ukulungelana neemeko, kungenza lula ukuba umelane neemeko […]
How do you know if you’re worrying too much: Wazi njani ukuba uxhalaba kakhulu?
Wonke ubani ubanexhala ngeli xesha linzima le- COVID-19. Oku yindlela eqhelekileyo yokuvakalelwa kwimeko engaqhelekanga kakhulu kodwa, kwabanye abantu ixhala, uxinzelelo kunye nolonwabo zingaba ngaphaya. Ungazibona njani ukuba uxhalaba kakhulu? Unexhala kakhulu ukuba ungafumana i- COVID-19 (nokuba wenza izinto ezikugcina ukhuselekile njengokuhlala ngaphakathi, ukugcina umgama kunye nokuhlamba izandla rhoqo) Awukwazi kulala kuba ungakwazi ukuyeka ukuxhalaba Ufunda […]
How should I deal with suicidal thoughts during COVID-19: Ngaba ndingamelana njani neengcinga zokuzibulala neziphazamisayo ngexesha le- COVID-19?
Ngala maxesha anzima, abanye oomama banganeengcinga ezingafunekiyo neziphazamisayo. Abanye bangaziva kakubi kangangokuba bacinge ngokuzibulala. Ingaba: Uziva ukhathazekile yaye ungenathemba ixesha elininzi? Uziba ungonwabeli kwanto? Ufuna ukushiywa wedwa? Awuboni ndlela yokuphuma kwimeko okuyo? Ucinga ukuba izinto ziza kunangcono ukuba awukho? Ucinga ngeendlela zokuzilimaza? Uziva usoyika ukuba ungalimaza usana lwakho okanye umntwana wakho? Uneengcinga zokulimaza usana okanye […]
How to know if you’re depressed: Wazi njani ukuba unoxinzelelo?
Kuyinto eqhelekileyo ukuxhalaba ngeli xesha linzima le- COVID-19. Ngamanye amaxesha ukuxhalaba noxinzelelo okanye ukungababoni nje abanye abantu, kungakukhokhelela kuxinzelelo lwengqondo. Nazi ezinye izinto ekufuneka uzijonge: Uziva uphantsi, unoxinzelelo lwengqondo okanye ulahlekelwe lithemba. “Ucinga kakhulu” Uneengcinga ezingakhiyo ezikwenza uphazamiseke. Uziva ungafuni kuthetha nabanye abantu nokuba ungabatsalela umnxeba okanye ubathumelele umyalezo nge-WhatsApp Uziva ukuba awufuni kwenza izinto […]
isiXhosa Mental Health
Coping with depression: Ukujongana noxhwaleka umphemfumlo, ixhala noxhomekeka ngelixesha leCOVID-19
Inqaku elincinci Ukuba ungumama ohleli ephilisana noxinzeleka komphefumlo, ixhala, ukuxhomekeka kwiziyobisi, iCOVID-19 isenokwenzeka ikwenza uzive kakubi ngakumbi kunakuqala. Isenokwenzeka uziva unentlungu zomzimba ezongezekileyo, iingxaki nokulala, umsindo okhawulezileyo neengcinga ezikucapukisayo. Konke oku kuyavakala. Kubalulekile ukuba uzijonge ngakumbi kwelixesha. Nanga amanqaku alungiselwe oomama abajijisana noxinzeleka komphefumlo, ixhala nokuxhomekeka kwiziyobisi. Ziphe ububele Ukuba ufumana ukuba ucinga kakhulu okanye […]
Coping with family violence: Ukujongana nobudlobongela bosapho ngelixesha le COVID-19
Iintsapho kunokwenzeka ziineenxinezelo ezininzi kwelixesha leCOVID-19. Iintsapho kusenokuba zivaleleke zonke emakhaya, abakwazi ukuphangela okanye banexhala lokuba bazo kusinda njani ngokwezemali. Amanye amalungu ekhaya basenoku ba basela utywal okanye basebenzisa iziyobisi ngokwe dlela abajongana noxinzelelo lwabo. Zonke ezizinto zingongeza kubudlobongela ngokwasemzimbeni, emoyeni okanye ngokwesondo ekhayeni ngakumbi ubudlobongela obujongiswe kuwe nabantwana. Ukutshixakala nomntu onobudlobongela ngexesha lokuba wedwa […]
Dealing with Stress: Ukujongana noxinzelelo nje ngomana kwelixesha le COVID-19
Inqaku elifuthsane Xa ungu mama awukhathaleli wena kuphela, ukhathalela abantwana bakho, kunye nabanye abantu abase khayeni. Lonto ithi, isenokwenzeka ukuba ujongene noxinezelo namaxhala kwelixesha le COVID-19. Use nokuba neengcinga ezikoyikisayo ngofumana intsholongwane ucinge “Kungathini na ukuba kungenzeka into ebantwaneni bam?” okanye “Ukuba ndingagula, ngubani ozogcina abantwana bam?”. Xa kuvalwa ii-creche nezikolo, ungabanoxinzelelo olongezekileyo olusukela ekubeni […]